नगरपालिकाहरूको कार्य क्षमतामा सुधार
संसारमा प्रायः मानिसहरू भगवान्प्रति विश्वास राख्छन् । राम्रो कर्ममा विश्वास गर्नु नै मानिसहरूको सफल जिन्दगी हो, बाँकी भगवान्ले हेर्ने त छँदै छ भन्ने सोच अहिले पाइन्छ । मानिसहरू गलत कर्म गरेर धन आर्जन हुन्छ भने राम्रो कर्म किन गर्ने भन्ने संस्कारको विकास भएको छ । यो गलत धारणा हो ।
मानिसले बाँचुन्जेल व्यक्ति, समाज, राष्ट्रको हितका लागि केही साहसिक काम (एडभेन्चर गर्नु भगवान्सरह हुन जान्छ । जनतासँग कर लिने आफ्नो ठाउँमा छ, विकास आप्mनो ठाउँ छ । अहिले मुलुकमा नगरपालिकाहरूले आफ्नो हिसाबले काम गरिराखेको छ । यसलाई सराहनीय मान्नुपर्छ । तर, यो देशमा गर्नुपर्ने कामहरू अरू पनि धेरै छन् जुन हुन सकेको छैन । यसका लागी ठूलो सोच, मन, दृष्टिकोण, विज्ञहरूको रायसुझाव आदिको खाँचो पर्छ । यो तथ्य नगरपालिकाहरूको दिमागमा घुसिरहेको छैन ।
सर्वप्रथम फोहोरमैलाको व्यवस्थापनको कुरा गर्ने हो भने अहिले आएर नगरपालिकाहरूले आप्mनो क्षेत्रबाट केही काम गरेका छन् । तर, समाजले नगरपालिकाहरूकाले फोहोरमैलाको राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकेको अनुभव गरेको पाइँदैन । कसरी नगरहरू सफा गर्ने भनेर यी कार्यालयहरूले समाजलाई शिक्षा दिन सकिरहेको छैन । नगरपालिकाहरूले काम गरिरहेका छन् तर सफल हुन सकिरहेको छैन । जथाभावी फोहोर गर्ने व्यक्तिहरूलाई जरीवाना गर्न नसक्नु, पर्याप्त जनशक्ति नहुनु, फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी शिक्षा दिन नसक्नु आदि कारणले शहर सफा राख्न नसकिएको हो । एक दुई ठाउँमा दीर्घकालीन ल्यान्डफिल्डको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, फोहोरलाई डोजरले सम्म गर्न नसक्नु तथा फोहोरबाट कम्पोस्ट मलमा परिणत गर्न नसक्नु पनि फोहोर व्यवस्थापनका कमजोरी हुन् । निजीक्षेत्रबाट फोहोर मैला समाधानका लागि अगाडि बढ्नेहरू धेरै छन्, तर यो विधि पनि सफल हुन सकिरहेको छैन । सरकार, नगरपालिका, सम्बद्ध निकाय कसको दोष हो त्यो बुझ्न गार्‍हो भएको छ ।
नगरपालिकाहरूमा भुस्याहा कुकुरको ठूलो समस्या रहेको छ । रोग फैलने तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुने भए पनि यसको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । भुस्याहा कुकुर निर्मूल गर्नुपर्ने थियो । तर, भुस्याहा कुकुरको संख्या झनै वृद्धि हुँदै आएको छ । भुस्याहा कुकुरलाई माया गर्ने जनावर अधिकारवादीहरू पनि देखिएका छन् । उनीहरूले यस्ता कुुकुरको उपचार गर्ने आदि काम गरिरहेका छन् । तर, भुस्याहा कुकुरले टोक्दा मानिसहरू आत्तिएका पनि छ, मानिसहरूलाई हैरान बनाएको छ । शहरी सौन्दर्यलाई बिगार्ने काम पनि भुस्याहा कुकुरले गरेको पाइन्छ । नगरपालिकाहरूले कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्छ ।
राजधानीको बढ्दो जनसंख्याले समस्या थपेको छ । बटुवाहरू धेरै भए पनि बाटो काट्नेहरूका लागि क्रशिङ ब्रिजहरूको कमी छ । कालिमाटी, लगनखेल, थापाथली, बानेश्वर, बालाजु, चाबहिल आदि ठाउँहरूमा क्रशिङ ब्रिजको कमी छ । यसबाहेक एउटा ठूलो राम्रो डिजाइनको फ्लाइओभर ब्रिज माइतीघर मण्डलामा निर्माण हुनु जरुरी देखिएको छ । सडक अव्यवस्थित हुनु, फूटपाथ राम्रो नहुनु तथा जथाभावी पार्किङ गर्नुले समस्या झनै जटिल बनेको छ । देशको मुटु मानिएको राजधानीमै पार्किङ र अव्यवस्थित शहर छ भने देशका अन्य भागमा कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सडक र शहरको स्वच्छता नै विकास र सभ्यताको उदाहरण हो । तर, हेर्दै आँखा बिझाउने शहर बनाएर हामी पर्यटक लोभ्याउने कल्पना गरिरहेका छौं जुन गलत छ ।
सरकार १० तिरबाट जनतासँग कर असुल गरिराखेको हुन्छ । तर, यसको बदलामा जनताले पाउनुपर्ने सहुलियत, सुविधा आदि कुरा पाइराखेका छैनन् । उदाहरणका लागि राजधानी जस्तो ठाउँमा पर्याप्त निःशुल्क पार्कहरू छैनन्, भएका केही पार्कहरूमा ताला लगाएको हुन्छ । केही सशुल्क पार्कहरू छन् तिनको अवस्था पनि राम्रो छैन । बढ्दो जनसंख्या भएको बेला मानिसहरू सस्तो मनोरञ्जन अथवा फुर्सदमा केही छिन विश्राम गर्ने स्थान नभएर उकुसमुकुस भएका छन् । तर, नगरपालिकाहरूलाई मतलब छैन । रत्नपार्क, भूगोलपार्क, शहीद पार्क, रानीपोखरी आदिलाई निःशुल्क रूपमा जनताका लागि खोली दिनुपर्छ । त्यसैले पार्कहरूलाई व्यवस्थापन गरी सरसफाई गर्नुपर्छ । फोहोर गर्नेलाई जरीवाना गरिनुपर्छ । धरहरा, पुतलीसडकमा सिंहदरबारको खाली जग्गा, नारायणहिटीका केही भाग जग्गा पनि सार्वजनिक पार्कहरू बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ । यहाँका सरकारहरू भाषण गर्दा नखरा गरेर जनता भन्ने गर्छ, के हामी धुपौरे जनता भयो भन्दैमा आफ्नो विलासितामा मात्र सरकार अघि बढिराख्ने ? के यी कुराहरू सरकारलाई शोभा दिन्छ ? सरकारले चाहियो भने के हुँदैन तर सरकारहरू गर्दैनन् । उदाहरणका लागि निःशुल्क शौचालयहरूको पनि निकै नै कमी छ । भएका शौचालयहरू निःशुल्क हुनुपर्छ, शौचालयको पहरेदारलाई तलब दिएर राख्नुपर्छ भने निरन्तर सफाइ भइराख्नुपर्छ । कमसे कम जनताका लागि यति काम त नगरपालिकाबाट गर्नुहोस् । अहिले राजधानीमा फूटपाथ समस्या, चिल्ड्रेन पार्क, तरकारी बजारहरू आदि जस्ताका लागि ठाउँहरूको समस्या छ । यसका लागि पनि नगरपालिकाहरूले विचार पुर्‍याउनु उति नै जरुरी छ । यी कुराका लागि नगरपालिकाहरूले विशेष सक्रियता देखाउनुपर्छ ।
देशका समस्याहरू प्रायः उस्तै छन् । विकास भएजस्तो देखिए पनि यस्ता समस्यामा जिउने हामी नेपालीको बानी नै भइसक्यो । देशको विकास भनेको केही सडक बन्नु र केही नयाँ भवन बन्नुमात्र होइन । अथवा गाडीहरू धेरै गुड्नु पनि होइन । शिक्षा, स्वास्थ्य यातायात, मनोरञ्जन, खानेपानी, सरसफाइ जस्ता कुरामा यथोचित प्रबन्ध हुनु विकास हो । यसका लागि नगरपालिकाहरूको भूमिका बढी हुन्छ । तर, त्यसो हुन सकेको छैन ।
-- रमेशकेशरी वैद्य